सुजीको पीठोबाट बनेका खानेकुरा खाँदा तपाईको स्वास्थ्यलाई के फाइदा गर्छ ?::Hamro Koshi Awaj / awaz
सुजीको पीठोबाट बनेका खानेकुरा खाँदा तपाईको स्वास्थ्यलाई के फाइदा गर्छ ?
एक व्यस्त जीवनमा, यो एक कठिन काम हो हरेक दिन स्वस्थ खाना खानु । यसको लािग तपाइँलाई आफ्नो भान्सामा सूजीको पर्याप्त मात्राको आवश्यकता पर्दछ। पोषण विशेषज्ञहरु धेरै राम्रो कारणहरुका लागि हप्तामा कम्तीमा दुई पटक खानको लागि सिफारिस गर्दछन् । यो सजिलै पच्न सक्ने सुपरफूड हो। जो तपाइँको आहारको एक हिस्सा हुनुपर्छ।
वास्तवमा, सूजी ५ मिनेटमा अर्थात यो १० मिनेटभन्दा कम समयमा पकाउन सकिन्छ। हामी सूजीसँग जोडिएका केहि स्वास्थ्य लाभको बारेमा यहाँ चर्चा गरिरहेका छौँ ।
१. तत्काल ऊर्जा दिन्छ
सूजीसँग बनेको कुनै पनि खानाले तत्काल ऊर्जा प्रदान गर्दछ किनकि यसमा कार्बोहाइड्रेट प्रशस्त छ । ब्रेकफास्टमा सूजीबाट बनेको भाँडासहित पाचनलाई बढावा दिन्छ र वजन घटाउन सहयोग गर्दछ।
यदि तपाइँ ती व्यक्तिहरु मध्ये एक हुनुहुन्छ जो नियमित रूपबाट शारीरिक व्यायाम गर्ने बानी छ, तब सूजीबाट बनेको खाजा उपभोग गर्नुपर्दछ ।
२. आइरनको कमि पूरा गर्दछ
सूजी आइरनको मुख्य स्रोत हो । फलामको कमी वा एनीमियाबाट पीडित मानिसहरुको आहारमा शामिल गर्नु पर्छ। सूजीबाट बनेको खाना रक्त सञ्चारमा सुधारमा मद्दत गर्दछ।
३. स्नायु प्रणाली स्वस्थ राख्छ
स्नायु प्रणाली तपाइँको भावनात्मक स्वास्थ्यमा एक महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यो एक स्वस्थ जीवनका लागि तपाइँको आहारको एक हिस्सा बनाउन आवश्यक छ । स्नायु प्रणालीको खराब कार्य स्ट्रोक, रक्तस्राव र अन्य गम्भीर संक्रमणको लागि नेतृत्व गर्न सक्छ। पर्याप्त मात्रा मा म्याग्नेशियम, जस्ता र फास्फोरसको उपस्थितिका कारण सूजी विभिन्न कोषका विकारहरुलाई रोक्नमा मद्दत गर्दछ।
४. मुटुको स्वास्थ्यका लागि लाभदायक
सूजी मुटु रोग र हाइपरलिपिडिमियाबाट पीडित मानिसहरूका लागि सबैभन्दा राम्रो मानिन्छ । सूजीमा शून्य कोलेस्ट्रोल हुन्छ जुन उच्च कोलेस्ट्रोल बाट पीडित बिरामीहरुका लागि एक लाभदायक विकल्प हो। यो खानामा समावेश गर्नका लागि यो एक आदर्श खाना आइटम हो।
५. तौल घटाउन प्रोत्साहित गर्दछ
सूजी प्रोटीन र फाइबर प्रशस्त पाइन्छ । जो लामो समयका लागि तपाइँको पेट भरी राख्न सक्छ। थियामिन, फोलेट र बी भिटामिनको एक धनी स्रोत, सूजी त्यो अतिरिक्त भोक मार्छ र तौल घटाउनमा सहायता गर्दछ।सूजी नयाँ आमाहरुका लागि अति आवश्यक छ । यो प्रोलैक्टिनको उत्तेजित गरेर स्तनपानलाई बढावा दिन्छ। यो हार्मोन दूधको आपूर्तिका लागि जिम्मेवार छ । स्तनपान गराउन आमाहरुलाई घ्यू र गुड़मा पकाएको सूजी खुवाउने गरिन्छ ।
६. मधुमेहका लागि सर्वश्रेष्ठ आहार
सूजीको ग्लाइसेमिक सूचकांक ६६ छ। यो मध्यम ग्लाइसेमिक सूचकांकको श्रेणी अन्तर्गत पर्दछ, तर अझै मधुमेहका समस्या भएकाहरूले मध्यम मात्रामा यसको सेवन गर्न सकिन्छ । फाइबर, प्रोटीन र ऊर्जाको एक दैनिक खुराकका लागि तपाइँको आहारमा स्वस्थ तरकारीहरुसँग सूजीबाट बनेको खानाहरू समावेश गर्नुहोस् ।
७. एन्टिअक्सिडेन्टमा धनी
सूजी सेलेनियममा समृद्ध एक एन्टिओक्सिडेंट छ । यसमा डीएनए कोशिकाहरुको ऑक्सीकरण रोक्न सक्छ। यस तरीकाले विभिन्न रोगहरुको जोखिमबाट बच्न सकिन्छ। यसले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।
८. भिटामिन र खनिजको एक उत्कृष्ट स्रोत
सूजी सबै भिटामिन र खनिजको एक उत्कृष्ट स्रोत भएकोले यो एक पौष्टिक खाना बनाउँछ। शून्य कोलेस्ट्रोल र ट्रान्स फैटी एसिड, कम बोसो उपस्थिति र कम नुन को स्तर यो सबै उमेर समूहका लागि एक सुपर खाना बनाउँछ।
त्यसैले महिलाहरुले स्वस्थ रहनका लागि स्वस्थ आहारमा सुजीबाट बनेका खाना समावेश गर्न आवश्यक छ । -एजेन्सी
अफ्रिकी मुलुकका नागरिकलाई नेपाल प्रवेशमा रोक
कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट ‘ओमिक्रोन’ बाट बच्च सतर्कता अपनाउन सुझाव
दलको कार्यक्रम गर्दा कोरोना सर्दैन सरकार ?